बाइबलका कथाहरू: अबीगेल र दाऊद - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
दाऊदलाई भेट्न आइरहेकी त्यो सुन्दरी को हो, तिमीलाई थाह छ? उसको नाउँ अबीगेल हो। ऊ बुद्धिमती छे र उसले दाऊदलाई एउटा खराब काम गर्नबाट रोक्छे। तर पहिला हामी दाऊदलाई के हुन्छ, थाह लगाऔं।
शाऊलदेखि भागेर दाऊद ओढारमा लुक्छ। उसका दाइहरू अनि अरू सबै परिवार दाऊद लुकेको ओढारमा आउँछन्। जम्माजम्मी ४०० जति मान्छे दाऊदकहाँ आउँछन् र दाऊद उनीहरूको नाइके बन्छ। त्यसपछि दाऊद मोआबको राजाकहाँ गएर यसो भन्छ: ‘मलाई के हुन्छ, थाह नलागुन्जेल, कृपया मेरो बुबा र आमालाई तपाईंकहाँ बस्न दिनुहोस्।’ यसपछि, दाऊद र उसका मान्छेहरू डाँडाहरूतिर लुक्न थाल्छन्।
यसको केही समयपछि दाऊद र अबीगेलको भेट हुन्छ। अबीगेलको पति नाबाल धनी जमिनदार थियो। उसका ३,००० भेडा र १,००० बाख्राहरू थिए। तर नाबाल निष्ठूर अनि नीच स्वभावको मान्छे थियो। उसकी पत्नी अबीगेल असाध्यै सुन्दरी थिई। ऊ बुद्धिमती पनि थिई। एक पटक उसले आफ्नो परिवारको ज्यानसमेत बचाउँछे। कसरी, हामी हेरौं।
दाऊद र उसका मान्छेले नाबालका भेडा-बाख्राहरूको हेरचाह गरेका हुन्छन्। यसकारण एकदिन दाऊदले आफ्ना मान्छेहरूलाई नाबालकहाँ मदत माग्न पठाउँछ। नाबाल आफ्ना मान्छेहरूसित मिलेर भेडाको ऊन खौरिरहेको बेला दाऊदका मान्छेहरू आइपुग्छन्। त्यतिखेर नाबालको घरमा भोज भइरहेको हुन्छ र त्यहाँ थुप्रै मीठा-मीठा खानेकुरा पाकिरहेको हुन्छ। दाऊदका मान्छेहरूले नाबाललाई यसो भन्छन्: ‘हामीले तपाईंका मान्छेहरूसित राम्रो व्यवहार गऱ्यौं। तपाईंको एउटा पनि भेडा चोरेनौं। बरु उल्टो तिनीहरूको राम्ररी हेरचाह गरिदियौं। त्यसकारण कृपया हामीलाई अलिकता खानेकुरा दिनुहोस्।’
तर नाबालले यस्तो जवाफ दिन्छ: ‘तिमीहरू जस्तो काम न धामका मान्छेहरूलाई म खानेकुरा दिन्नँ।’ उसले असाध्यै छुच्चो भएर दाऊदको विषयमा नराम्रो कुरा बोल्छ। दाऊदका मान्छेहरू फर्केर आएपछि दाऊदलाई सबै कुरा बताउँछन्। उनीहरूको कुरा सुनेर दाऊद असाध्यै रिसाउँछ। उसले आफ्ना मान्छेहरूलाई यसो भन्छ: ‘सबैले आ-आफ्नो तरबार भिर!’ अनि उनीहरू सबै जना नाबाल र उसका मान्छेहरूलाई मार्न हिंड्छन्।
नाबालले छुच्चो कुरा गरेको सुन्ने एक जना मान्छेले अबीगेललाई गएर सबै बताउँछ। अबीगेल तुरुन्तै खानेकुरा तयार पार्छे र गधामाथि राखेर दाऊदलाई भेट्न जान्छे। दाऊदलाई भेटेपछि ऊ गधाबाट ओर्लिन्छे, दण्डवत् गर्छे र भन्छे: ‘हजुर, मेरो पति नाबालको कुरालाई ध्यान नदिनुहोस्। ऊ मूर्ख छ र मूर्ख काम गर्छ। मैले तपाईंका लागि उपहार ल्याएकी छु। कृपया स्वीकार्नुहोस् र जे भयो, त्यसका लागि हामीलाई माफी दिनुहोस्।’
दाऊद यसो भन्छ: ‘तिमी बुद्धिमती रहिछौ। नाबालसित खराबीको बदला लिन र उसको हत्या गर्नदेखि तिमीले मलाई रोक्यौ। अब ढुक्क भएर घर फर्क।’ पछि नाबाल मर्छ र दाऊदले अबीगेललाई पनि बिहे गर्छ।
१ शमूएल २२:१-४; २५:१-४३.
दाऊदलाई भेट्न आउने आइमाई को हो, चित्र हेरेर बताऊ। उसको स्वभाव कस्तो छ?
नाबाल को हो?
दाऊदले आफ्ना मान्छेहरूलाई नाबालकहाँ किन मदत माग्न पठाउँछ?
नाबालले दाऊदका मान्छेहरूलाई के भन्छ र यो सुनेर दाऊदले के गर्छ?
अबीगेलले कसरी आफ्नो बुद्धि देखाई?
पहिलो शमूएल २२:१-४ पढ्नुहोस्।
मसीही भाइबहिनीहरूलाई मदत गर्नुपर्छ भनेर दाऊदको परिवारले बसालेको राम्रो उदाहरणबाट कसरी सिक्छौं? (हितो. १७:१७; १ थिस्स. ५:१४)
पहिलो शमूएल २५:१-४३ पढ्नुहोस्।
बाइबलले नाबाललाई किन नीच मान्छे भन्छ? (१ शमू. २५:२-५, १०, १४, २१, २५)
अबीगेलको उदाहरणबाट मसीही पत्नीहरूले के सिक्न सक्छन्? (१ शमू. २५:३२, ३३; हितो. ३१:२६; एफि. ५:२४)
अबीगेलले दाऊदलाई कुन दुई खराब काम गर्नदेखि रोकी? (१ शमू. २५:३१, ३३; रोमी १२:१९; एफि. ४:२६)
अबीगेलको कुरा सुनेपछि दाऊदले भनेको कुराले अहिले स्त्रीहरूप्रति यहोवाको जस्तै दृष्टिकोण राख्न पुरुषहरूलाई कसरी मदत गर्छ? (प्रेरि. २१:८, ९; रोमी २:११; १ पत्रु. ३:७)
अबीगेलको वैवाहिक जीवन कठिन भएको कुराबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं?